A na-ejikarị gloves PVC eme ihe na ndụ kwa ụbọchị, na mmetụta nchebe ahụike, arụmọrụ nchedo dị mma, nchekwa na ndị na-adịghị egbu egbu, nabatara site na iji nchekwa. Ngwaahịa na mba ndị mepere emepe na mpaghara nwere ahịa sara mbara. (na usoro a, a na-etinye obere ọka ọka na elu nke gloves iji mee ka uwe aka na-adị mma) na uwe na-enweghị ntụ (na usoro ahụ, a na-eji Pu na-agwọ ọrịa iji dochie ntụ ọka iji rụọ otu ọrụ ahụ Site na ọkwa ahụ, enwere gloves ọgwụ na-arụ ọrụ nke uwe aka nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe (ịmata ọdịiche dịkarịsịrị nha anya nke agịga); a na-ebipụta ngwaahịa na ntụpọ ụlọ ọrụ ntụ ntụ na ntụpọ dọkịta na-enweghị ntụpọ mkparịta ụka SMLXL, ML dị ka ngwaahịa ndị bụ isi.
Food ọkwa ịkwanyere uwe Introduction
A na-ejikarị gloves PVC eme ihe na ndụ kwa ụbọchị, na mmetụta nchebe ahụike, arụmọrụ nchedo dị mma, nchekwa na ndị na-adịghị egbu egbu, nabatara site na iji nchekwa. Ngwaahịa na mba ndị mepere emepe na mpaghara nwere ahịa sara mbara. (na usoro a, a na-etinye obere ọka ọka na elu nke gloves iji mee ka uwe aka na-adị mma) na uwe na-enweghị ntụ (na usoro ahụ, a na-eji Pu na-agwọ ọrịa iji dochie ntụ ọka iji rụọ otu ọrụ ahụ Site na ọkwa ahụ, enwere gloves ọgwụ na-arụ ọrụ nke gloves nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe (ịmata ọdịiche dịkarịsịrị nha anya nke agịga); Site na nkewa ahụ ka ekewara n'ime XS \_ S \_ MLL \_ XL toro ogologo, sie ike, Mgbe nyochachara, a na-ebipụta ngwaahịa ndị ahụ na ọkwa ụlọ ọrụ ntụ ntụ na ntụpọ dọkịta na-enweghị ntụpọ S \_ M \_ L \_ XL, ML dị ka ngwaahịa ndị bụ isi.
Food ọkwa ịkwanyere uwe mmepụta akara Product nkọwa
Glokwanyere uwe mmepụta akara adopts kasị elu glove mmepụta usoro, ngwaahịa ruru ọnụego esịmde karịa 97%, ngwaahịa ngwaahịa dị mma, mkpụrụ dị elu, nwere ike dochie ọrụ aka kpamkpam;
Ngwunye na-edoghị edozi bụ otu ihe nkiri na ihe nkiri ahụ. A na-emecha uwe aka n'otu oge site na nkedo aka aka, ịfụ ọkụ, ịgbachapụ ọkụ ọkụ, njikwa mpụga na ịmegharị aka, wdg, na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, ndị na-arụ ọrụ ole na ole na ọnụahịa mmepụta ala.
Uwe mmepụta akara ike ngwa ọrụ
1. 1.Iwebata nke mbufe nnyefe isi sprocket Ọdịdị, dum yinye na-agba ọsọ na-eguzogide bụ obere, mmepụta ọrụ bụ mụ, ala mkpọtụ;
2.Isi ịnya ụgbọ ala na-edozi ọtụtụ nsogbu, dị ka ịdọrọ, nsogbu, ọdịda na ihe isi ike na ndozi;
3.ike ngwá kenha ji esi mmiri ọkụ, ike ịzọpụta na elu arụmọrụ, ezi uche Ọdịdị, ala mkpọtụ, elu nchekwa arụmọrụ;
4.nhazi usoro, na - igwe ngbanye teknụzụ;
5.eji maka ebu mkpịsị aka nhicha isii-drum ogologo ntutu ahịhịa ebu ihicha technology;
6.A dịgasị iche iche nke nkọwa nke otu igwe mmepụta, akpaka onu ukpụhọde, ogologo ọrụ ndụ nke igwe;
Dị ka ndị ahịa kwesịrị iji chepụta ogologo dị iche iche 125-200m, elu, na-eri nke nlereanya.
A na-ejikarị gloves PVC eme ihe na nchebe ọrụ na ịdị ọcha nke ụlọ na nyocha ọcha, ụlọ ọrụ nri, ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ, ụlọ ọrụ eletriki, ụlọ ọrụ ọgwụ, ụlọ ọrụ na-agba agba na mkpuchi, ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ na agba, ụlọ ọrụ ugbo, oke ohia, anụ ụlọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Nke gara aga: General ịkwanyere uwe mmepụta akara
Osote: Sterilization ọkwa nitrile uwe mmepụta akara
Vkwanyere Disposable uwe Ime Machine
Vkwanyere Nnyocha uwe Ime Igwe
Vkwanyere uwe Dipping Machine
Vkwanyere uwe Equipment
Vkwanyere uwe Machine
Vkwanyere uwe Production Line